2019 « A.S.M.A
A.S.M.A-2019/20 Project (Summer English & Computer Free Charge Upgrading Course)
ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့ (Arakan Student Monks Association in Thailand) ၏ 2018-2019 Education Project အတွက် ASMA အသင်းနှင့် ဇီးကိုင်းရွာ (ရသေ့တောင်မြို့ နယ်) မှ ပူးပေါင်းကျင်းပသော Academic Vision နွေရာသီ လူငယ်စွမ်းရည်မြှင့်တင် သင်တန်းတွင် ကျောင်းသား/သူ (57) တို့အား အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ကွန်ပျူ တာအတွက် ပညာဒါနများကို ပို့ချသင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့သည်။ အဖက်ဖက်မှ ပူးပေါင်းပေးကြသော သင်တန်းနည်းပြဆရာများ၊ ဇီးကိုင်းရွာ (ရသေ့တောင်မြို့ နယ်) မှ တာဝန်ရှိသူများအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
This year in 2019, asapart of the academic vision of ASMA education project, we have aligned withalocal Village of Zee Kine of Rathedaung Township” and had aidedafree education of English and Computer courses to minimum (57) youths both primary and university students. We are very thankful to those, both volunteer teachers and helpers ofalocal organization, who supported to fulfil an achievement of this course.
ရခိုင်ကျောင်းသား ရဟန်းတော်များအဖွဲ့ (ထိုင်း)
1:22 AM Share:
ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့ (Arakan Student Monks Association in Thailand) ၏ 2018-2019 Education Project အတွက် ASMA အသင်းမှ ကြီးမှူးဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးသော Academic Vision နွေရာသီ လူငယ်စွမ်းရည်မြှင့်တင် သင်တန်းတွင် ကျောင်းသား/သူ (85)ဦးတို့အား မြေပုံမြို့နယ် ၀က်ခေါင်းကျေးရွာတွင် ပညာဒါနများကို ပို့ချသင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့သည်။ အဖက်ဖက်မှ ပူးပေါင်းပေးကြသော သင်တန်းနည်းပြဆရာများ၊နှင့် ရပ်ရွာလူကြီးများ တာဝန်ရှိသူများအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
We areanon-profits organization, so-called Arakan Student Monks Association (ASMA) in Thailand. This year in 2019, asasegment of academic vision of ASMA education project, and aidedafree education to minimum (85) youths both primary and university students at (Mre pone Township, Wakhaunt Village). We are very thankful to those, both volunteer teachers and helpers ofalocal Volunteer who supported to fulfil an achievement of this course.
12:44 AM Share:
A.S.M.A-2019/20 Project (Summer English Free Charge Upgrading Course)
ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့ (Arakan Student Monks Association in Thailand) ၏ 2018-2019 Education Project အတွက် ASMA အသင်းနှင့် ဘ၀အားမာန်အသင်း (ပေါက်တော) မှ ပူးပေါင်းကျင်းပသော Academic Vision နွေရာသီ လူငယ်စွမ်းရည်မြှင့်တင် သင်တန်းတွင် ကျောင်းသား/သူ (80) တို့အား ပညာဒါနများကို ပို့ချသင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့သည်။ အဖက်ဖက်မှ ပူးပေါင်းပေးကြသော သင်တန်းနည်းပြဆရာများ၊ ဘ၀အားမာန်အသင်း (ပေါက်တော) မှ တာဝန်ရှိသူများအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
We areanon-profits organization, so-called Arakan Student Monks Association (ASMA) in Thailand. This year in 2019, asasegment of academic vision of ASMA education project, we have aligned withalocal organization named “Ba Wa Arr Marn of Pauk Taw Town” and aidedafree education to minimum (80) youths both primary and university students at Pauk Taw central library. We are very thankful to those, both volunteer teachers and helpers ofalocal organization, who supported to fulfil an achievement of this course.
Academic Vision (A.S.M.A-Summer Project- 2019/20)
11:48 PM Share:
Academic Vision -Education Project-ASMA
Academic Vision Summer English Upgrading Class ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့(ထိုင်း)မှ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျှက်ရှိသော အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ကွန်ပျူတာ အခမဲ့သင်တန်းများကို ရခိုင်ပြည်နေရာအသီးသီးတွင် သင်ကြားပြသခဲ့ကြပါသည်။
ယခု 2019 ခုပညာသင်နှစ်တွင်လည်း ASMA- ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့(ထိုင်း)မှ သွားရောက် ဖွင့်လှစ်မည့် နွေရာသီ ပညာဒါန အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ကွန်ပျူတာ သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းပြရာတွင် Volunteer ဆရာတော်များ၏ အသွားအပြန်စရိုက် တစ်ပါးလျှင် (5000)ဘတ်စီကို အသင်းမှ ထောက်ပံ့ကူညီသွားမည်ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပသို့ရောက်ရှိနေကြသော အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ သံဃာတော်များ လူပုဂ္ဂိုလ်များ အနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်အတွင်းသို့ ပညာသင်ကြားရန် သွားရောက်မည့် သံဃာတော်များတို့အား တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ၀ိုင်းဝန်းကူညီလိုပါက ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
🙏သင်တန်းပြရန် နေရာများ။ တောင်ကုတ်၊ ပေါက်တော၊ ရသေ့တောင်၊ ပုဏ္ဏာကျွန်း၊ ရန်ကုန်။
⌛ဆက်သွယ်ရန်တာဝန်ခံဆရာတော်များ။ ဥက္ကဌဆရာတော်-0805567872 / ပညာရေးမှူးဆရာတော်-0945950630 / ပြန်ကြားရေးမှူးဆရာတော်-0993241786.
🙏2018 ခုနှစ် ရခိုင်ပြည်အတွင်း အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ကွန်ပျူတာသင်တန်းပြခဲ့ကြသော Volunteer ဆရာများနှင့် သွားရောက်ခဲ့သော နေရာများ🙏
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ 2018 ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ 40 ခန့်တက်ရောက်သင်ယူခဲ့ကြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တောမြို့နယ်တွင် 2018 ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ 80 ခန့်တက်ရောက်သင်ယူခဲ့ကြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ယိုးတရုတ် တွင် 2018 ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ 150 ခန့် တက်ရောက်သင်ယူခဲ့ကြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျော်ဖြူမြို့ လိပ်ခမော်ရွာတွင် 2018 ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ 80 ခန့်တက်ရောက် သင်ယူခဲ့ကြသည်။
Posted by A.S.M.A - ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ | 1 comment
7:33 AM Share:
''Academic Vision'' Summer English and Computer Upgrading Class ကို ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့(ထိုင်း)မှ ပုံမှန် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း နွေရာသီအချိန်တွင် အင်္ဂလိပ်စာ ကွန်ပျူတာ သင်တန်းများ အခမဲ့ပြသခဲ့ကြပါသည်။
ယခု(၂၀၁၈.၂၀၁၉) ပညာသင်နှစ်တွင်လည်း နွေရာသီ သင်တန်းပြရန် အစီအစဉ်ရှိပါသဖြင့် (MCU)တွင် ကျောင်းတက်နေကြသော ရခိုင်ကျောင်းသား သံဃာတော်များဘုရား အရှင်ဘုရားတို့အနေဖြင့် အသင်းနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး အဖက်ဖက်ကနိမ့်ကျနေသော ဘုရားတပည့်တော်တို့၏ ရခိုင့်လူငယ်တို့အနာဂတ်ကို ရှင်သန်ရပ်တည်ဖို့အတွက် ငါတို့တတ်နိုင်သည့်ဘက်က ၀ိုင်းဝန်းကူညီမည်ဆိုသည့် လူသားကောင်းကျိုးအတွက် မေတ္တာ စေတနာအရင်းခံကာ ပညာရေးဖြင့် လူမျိုးတင့်တည်မြင့်မားနှိုင်ဖို့ရန် စေတနာသဒ္ဒါအားသန်ကာဖြင့် တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ပေးဖို့ ASMA-Member ၀င်ဆရာတော်တို့အား အသိပေးမေတ္တာရပ်ခံ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည် ဘုရား။
ပညာရေးနှင့် ကျောင်းသားရေးရာတာဝန်ခံ ဆရာတော်များ
👉 အရှင် က၀ိသာရ -0945950630
👉 အရှင် တိက္ခနန္ဒ -0994580348
နွေရာသီ ရခိုင်ပြည်အတွင်း စာပြရန် Volunteer ဆရာများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
9:55 PM Share:
27.1.2019-နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံမဟာချူလာလောင်ကွန်းတက္ကသိုလ် (Asean Studies Centre) မှကြီးမှူးကျင်းပသော အာဆီယံနိုင်ငံတကာ ရိုးရာပြပွဲအခမ်းအနားတွင် ရခိုင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအကဖြင့် ကပြဖျော်ဖြေ ကူညီပါဝင်ပေးကြသော ရခိုင်လူငယ်စာသင်ဝိုင်း (ထပ်ခမ်း)နှင့် ရခိုင်လူငယ်များအကအဖွဲ့ (စွယ်စ၀ပ်)တို့အား ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့(ASMA)ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း ဤဂုဏ်ပြုလွှာဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
9:28 PM Share:
နွေရာသီ ရခိုင်ပြည်အတွင်း စာပြရန် Volunteer ဆရာများ...